Pet Toothbrush Vagadziri & Vatengesi | China Pet Chikwesheso Chikwata
Pet Kaviri Musoro Bhurosi
Tsananguro Maparamende Type Dental Chimbwa Imbwa Bhurosi Remazino Item NO. TB203 Ruvara Kugadziriswa Kwezvinhu PP Saizi 225 * 18 * 28mm Kurema 9g MOQ 2000PCS Package / Logo Yakatemerwa Kubhadhara L / C, T / T, Paypal Mitemo Yekutumira FOB, EXW Kubatsira kwePet Kaviri Musoro Bhurosi rePet Diki Musoro Wemazino Bhurosi Rakachikwa waya Imbwa Slicker Brush. Pet Kaviri Musoro Bhurosi Webhurosi Yedu Sevhisi 1.Mutengo Wakanyanya-Wakajairika Zvigadzirwa mumutengo wakanaka pakati pevatengesi 2.Fast Dhirivhari ...
Mazino Finger Imbwa Bhurosi
1.Dental Finger Imbwa Bhurosi remazino ndiyo nzira kwayo yekuita kuti pal yako igeze uye chena. Iri Dhivha Finger Imbwa Bhurosi remazino rakagadzirirwa kuve rakapfava pamatadza uchidzikisa plaque uye tartar, kubatsira kudzivirira zvirwere zvemumuromo uye nekuzorodza kufema ipapo.
2.Ivo vanoratidzira isina-kutsemuka dhizaini inochengeta mabrashi pamunwe wako kunyangwe munzvimbo dzakaomarara-kusvika. Bhurasho rega rega rinoitwa kuti rinokwana zvidiki zvidiki kusvika pakati nepakati.
3.Dental Finger Imbwa Bhurosi remazino rakagadzirwa nemhando yepamusoro yezvinhu, 100% yakachengeteka kune ako zvipfuyo.
Vatatu Musoro Pet Chipwachi Bhachi
1.Kusiyana nezvimwe zvigadzirwa zveshuwa embwa pamusika, uyu musoro wemusoro wemazino wemazino wembwa iine matatu seti emabristles, iwe unosvika pakukwesha kunze, mukati uye kumusoro kwemazino zvese kamwechete!
2.Musoro wakasarudzika webhurashi iri unonyanya kushanda pakubvisa chikafu nemabhakitiriya kubva mazino embwa uye matadza.
3.Three musoro Pet chikwesheso chembwa chine ergonomic yerabha mubato iyo iri nyore kusimba uye yakagadzikana kubata kuti iwedzere kukurumidza nguva yekushambidzika.
4.Our matatu musoro wemhuka bhurosi rezino kune imbwa iri nyore zvakakwana kuti ishandiswe kune wese munhu kunyangwe yekutanga timers kuona kuti bhurasho redu rezino riri nyore kushandisa sezvo richishanda mukusimudzira mazino ane hutano uye matadza.
Imbwa Finger Bhurosi remazino
1.Dog Finger chikwesheso chingabvisa zvinyoronyoro uye chikafu chikafu kubva kumhuka yemhuka yako nekuzadzawo matadza.
2.Dog chigunwe chikwesheso inopa yakapfava nzira yekubvisa mabara uye chikafu marara kubva kumhuka dzinovaraidza 'mazino. Nyoro rabha bristles inoteedzana izvo zvinoita kuti igare zvakanaka iwe nechipfuwo chako.
3.Iyo yakanamatira chengetedzo mhete inosungira iyo imbwa chigunwe mazino bhurosi kune chigunwe chako, zvichibatsira kuchengetedza bhurasho munzvimbo yekuwedzera chengetedzo.